CURRENT HEALTH SOSO-KEVITRA hafa Cinema efaha amin'ny isam- FIALAM-BOLY TOEKARENA
Ny tsena Gambela sy ny fanatanjahan-tena dia manao fanodinana savoka
Chinde Sep 11, 2020 0
Tena malaza, ny famokarana savoka dia heverina ho manimba tontolo iainana. Ny mpilalao sasany toa ny tsenan'ny Gambela Market any Gambela dia nivadika ho bisikileta, na ny zava-kanto fanarenana taolana hamoronana akanjo tany am-boalohany.…
Ny fototra H an'ny mpandraharaha Malagasy, Hassanein Hiridjee, dia mipetraka eo afovoan'i Paris
Chinde Sep 7, 2020 0
Hassanein Hiridjee, CEO an'ny Axian, dia manokatra seho fampirantiana ao Paris Efa misy eto Antananarivo, ny fototra H an'ny mpandraharaha malagasy, Hassanein Hiridjee, dia mipetraka ao afovoan'i Paris, miaraka amin'ny fampirantiana voalohany…
Master Frans Hals: ny iray amin'ireo hosodoko dia nangalatra indray tao amin'ny tranom-bakoka.
ALEXIS WAYAN Aogositra 28, 2020 0
Sary hosodoko nataon'ilay tompony Frans Hals lehibe, ankizilahy roa nihomehy no nangalatra ny alarobia maraina teo tao amin'ny tranom-bakoka iray tao Leerdam (Holandy). Fanintelony izao no nangalatra ny tranom-bakoka ity tranom-bakoka ity. Ny hosodoko, izay maneho roa ...
Rehefa avy nikatona 6 volana dia nanokatra ny varavarany ny MoMA Museum any New York!
Ankafizo am-pilaminana i Monet, Van Gogh na Warhol malaza: taorian'ny fanakatonana efa ho enim-bolana noho ny areti-mifindra coronavirus, ny tranombakoka MoMA malaza any New York dia ny Alakamisy lasa teo, tranombakoka lehibe voalohany tao an-tanàna ...
Fifandirana manodidina ny sehatry ny haino aman-jery senegaly!
Chinde Aogositra 27, 2020 0
Nandritra ny tsindry avy amin'ny fikambanana ara-pivavahana, dia nohavaozina ny Filan-kevitry ny lalàna mifehy ny Audiovisual Senegal, tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra, ilay andian-dahatsoratra "Infidèles". Feo maromaro no natsangana hanamelohana fihetsika iray momba ny sivana. "Infidels", vanim-potoana 1, ...
Senegaly: fanakianana sy fifanolanana mahatsikaiky manodidina ilay andian-dahatsoratra "Andriambavy manambady"
Natokana tamin'ny fitarainana natolotry ny fikambanan'i Islamra Jamra sy ny Komity miaro ny soatoavina ara-moraly ao Senegal, ilay andian-dahatsoratra "Maherin'ny lehilahy manambady", navoaka tamin'ny 2sTV, misy sazy mihatra amin'ny…
Famerenana ny lova afrikanina: raharaha marefo!
Chinde Aogositra 23, 2020 0
Ny filoham-pirenena voatendry ao amin'ny tranom-bakoka Quai Branly-Jacques Chirac any Paris amin'ny faran'ny volana mey, dia hanana ny andraikitra mavesatra i Emmanuel Kasarhérou amin'ny fitantanana ny rakitra maloto famerenana amin'ny laoniny. Teraka tamin'ny raim-pianakaviana iray ary reny metropolitan, ...
Mankalaza ny faha-55 taona ny Faritra Otonika Tibet any Sina
Mandritra ny fotoana fankalazana ny fetin'ny Shoton (fetin'ny fanasambe yogurt) sy ny faha-55 taona nijoroan'ny Vondrom-piarahamonina Tibet tany Sina, ny mpanao gazety avy any CGTN frantsay dia nankany Tibet nandritra ny telo herinandro. Manuel Rambaud, a ...
Hanokatra varavarana ny varavarana malaza an'ny New York Museum of Modern Art (MoMA) sy ny British Museum.
Hisokatra indray ny Museum Museum of Modern Art (MoMA) sy ny Museum British any New York, ny 27 aogositra, rehefa avy nikatona nandritra ny dimy volana izy ireo noho ny fitsipika napetraka mba hampitsaharana ny fifandonan'ny coronavirus. The ...
Critérium Africaain 2020: Fampisehoana ho an'ny tantaran-dahatsoratra afrikanina
Chinde Aogositra 22, 2020 0
Zunon Eunice, mpanao kolonely Ivoziana dia handray anjara amin'ny fampisehoana Music Awards izay hotanterahina amin'ity taona ity any Belzika taorian'ny nanendrena azy tany amin'ny Critérium Africaain 2020. Nizara ny vaovao tsara tamin'ny mpankafy azy tao amin'ny pejiny Facebook izy…